देश शोकमय भएको बेला आयो गुप्चरको डरलाग्दो रिपोर्ट, भन्छन केपी ओलीको ज्यान खतरामा छ ! – Rastriyapatrika
देश शोकमय भएको बेला आयो गुप्चरको डरलाग्दो रिपोर्ट, भन्छन केपी ओलीको ज्यान खतरामा छ !
काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि चुनावी अभियानका क्रममा आक्रमण हुनसक्ने रिपोर्ट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्चर)ले तयार पारेको छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रको प्रमुख सुरक्षा निकायमध्येको एक गुप्चर विभागले आक्रमणकारीहरुले आफ्नो निशानामा शीर्ष नेतालाई लक्षित गरेको र त्यसमा ओली एक नम्बर रहेको जानकारी एमालेलाई गराएको छ । र, उसले सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
गुप्चर विभागको सुझावपछि ओलीले सरकारसँग सुरक्षा मागेका छन् । उनले आफ्नो सचिवालयमार्फत आफूलाई सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै सरकारलाई पटकपटक सुरक्षाकर्मी बढाइदिन र डीएसपी नेतृत्वको सुरक्षाकर्मी दिन आग्रह गरेका छन् । तर, सरकारले भने यस विषयमा केही पहल नगरेको सचिवालयले जनाएको छ । हाल अध्यक्ष ओलीको सुरक्षामा सई नेतृत्वको सानो संख्यामा सुरक्षाकर्मी रहेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भने डीएसपी दानबहादुर मल्लको नेतृत्वमा ठूलो संख्याका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिँदै आएका छन् । सामान्य नागरिकले पनि आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गर्दै निवेदन दिए सुरक्षा व्यवस्था गरिन्छ । तर, सरकारले भने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सुरक्षा दिन कञ्ज्युस्याइँ गर्दै आएको छ ।
ओली सचिवालयले नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्याललाई पनि अध्यक्ष ओलीको सुरक्षाका लागि संवेदनशील भइदिन आग्रह गर्दा अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराउनुपर्छ भन्दै आलटाल गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ ।
mediadabali बाट साभार